ခရစ်ယာန်သာသနာ | အမေးများအတွက် အဖြေလွှာ | Page 2
သူ့ကိုဘာ့ကြောင့် ကိုးကွယ်ကြရ သနည်း? December 10, 2009
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 11:08 am
ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်နှုတ်မှ ထာဝရဘုရားတစ်ပါးတည်းကိုသာကိုးကွယ်ရန် မိန့်တော်မူ၏၊ သူ့ကိုဘာ့ကြောင့် ကိုးကွယ်ကြရ သနည်း?
ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်း အခန်းကြီးလေးတွင် ယေရှုက မာရ်နတ်ကိုပြောသော စကားဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကား အားဖြင့် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ၊ ဂျူးဘာသာဝင်များနှင့် ယေဟောဝါသက်သေခံများက အများဆုံးမေးတတ် ကြပါသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၂၂ တွင် ရှင်ယောဟန်က ကောင်းကင်တမန်အား ပျပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ရန် လုပ်သောအခါ ကောင်းကင်တမန်က ငြင်းဆန်လျက် ဘုရားသခင်ကိုသာ ကိုးကွယ်ရန် မိန့်ဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင် နှုတ်မှ ထိုကဲ့သို့ဆိုခဲ့သော်လည်း ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်က တမန်တော်များနှင့် လူနာများတို့၏ ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခံယူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုဘုရားက အဘယ့်ကြောင့်မငြင်းခဲ့ပါသနည်း၊ ယေရှုသည် ကိုယ်တော်တိုင် ထာဝရဘုရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (more…)
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 11:06 am
ထိုအရာသည် လူတို့ သတ်မှတ်သည့်စံဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ် ကဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ ဟု ဆိုထားသလို(လု ၁၈း၁၉) ဖြောင့်မတ်သောလူသား တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှမရှိဟုလည်း (ရော ၃း၁၀) ဆိုထား ပါသည်။ တယောများ တို့ကို ကိုကြိုးညှိကြရာတွင် တယောအချင်းချင်း စံထားညှိခြင်း မပြုဘဲ စန္ဒယားကိုသာ စံထားညှိပါသည်။ လူကောင်းတစ်ဦးဟု သတ်မှတ် လိုပါက ယေရှုကိုစံထားပြီး သတ်မှတ်ရပေမည်။ လူကောင်းလူတော်ဆိုသည့်သူက ကောင်းမှုနှင့် ပတ်သက်လို့ ဩဇာအလွှမ်းမိုးဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ဟု လူတို့၏ သတ်မှတ် ခြင်းကိုခံ ရသည့်ယေရှု ကို အသိအမှတ်မပြုလျင် ထိုသူကို လူကောင်းလူတော်ဟု သတ်မှတ်ထိုက်ပါ တော့မည်လား။ ထိုလူတော်တစ်ဦးသည် ရာစုအဆက်ဆက် လူတို့အပေါ်ဩဇာ အလွှမ်းမိုးဆုံးနှင့် အထင်ရှားဆုံးသော ယေရှုဘုရား အကြောင်းကို မသိဟုဆိုခြင်းသည် သင့်လျော်ပါသလား။ ခေတ်အဆက်ဆက် ရောင်းအကောင်းဆုံးနှင့် လက်ဆောင်ပေး အများဆုံးဖြစ်သည့် သမ္မာကျမ်းစာ တော်မြတ်ကို ဖတ်ရှုကြည့်ဖို့ သတိမဲ့သူသည် လူတော်တစ်ဦး ဖြစ်သင့်ပါသလား။
အမြင်းကျဉ်းမြောင်းပြီး မတရားသလို ဖြစ်မနေဘူးလား?
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 11:04 am
ယေရှုအားဖြင့်သာလျှင် ကောင်းရာဘုံသို့ရောက်နိုင်မည်ဟူသောအဆိုသည် အမြင်းကျဉ်းမြောင်းပြီး မတရားသလို ဖြစ်မနေဘူးလား?
အမြင်မကျဉ်းမြောင်းသူဖြစ်ပါက ထိုကဲ့သို့ဆိုရမည့်အစား ဘုရားက လူတွေကို ဘာကြောင့်အတင်းအဓမ္မ လိုက်ကယ် နေရတာလဲဟု မေးသင့်ပါသည်။ နားထောင် လိုသည်ဖြစ်စေ နားမထောင်လိုသည်ဖြစ်စေ ဘာသာစကား မျိုးစုံတို့ဖြင့် ရေဒီယိုနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဂြိုဟ်တုစလောင်းတို့မှ ထိုတရားစကားကို လူတိုင်း နေရာတိုင်းမှ မကြား ချင်မှအဆုံး ကြားနေ ကြရပါသည်။ ယေရှု၏ ကယ်တင်ခြင်း တရားတော် ဝေစာများ ဟာလည်း မရချင်မှအဆုံးပါ။ ယေရှုသည်သာ လူသားတိုင်းတို့၏ တစ်ခုတည်းသော သုခဘုံသို့ရောက်ရာလမ်း ဖြစ်သည်ဟူသော အဆိုသည် အမြင် ကျဉ်းမြောင်းသည့် မဆင်မခြင် ပြောဆိုသော အတ္တစွဲအဆို မဟုတ်ပါ၊ ကြောင်းကျိုး ညီညွတ်ဆီလျော်လျက် အထောက်အထား ခိုင်လုံတိကျမှန်ကန်စွာရှိသော အဆိုဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုဘုရားအကြောင်းကိုမကြားသိလိုက်ရဘဲ သေဆုံးသွားသောသူများနှင့် ကလေးများတို့ကိုဘုရားက ငရဲချလျှင် တရားပါမည်လား?
ဘုရားသခင်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူ၏ဟု ကျမ်းစာကဆိုထား ပါသည်။ (၁ယော၎း၁၀) အဘယ်လူသား တစ်ဦးကို မျှလည်း ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက် စေလိုကြောင်းလည်း ဖေါ်ပြထားပါသည်။ (၂ပေ ၃း၉) သူငယ်တို့ကိုငါ့ထံသို့ လာပါလေစေ မဆီးတားကြနှင့်၊ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ထိုသို့သောသူတို့၏ နိုင်ငံဖြစ်၏။ (လု ၁၈း၁၆) ဆိုသည့် ကျမ်းစကားတို့အရ ဘုရားသခင်သည် ဖန်ဆင်းထားသော အရာများအပေါ် ထိုသူတို့၏ သိရှိနားလည်မှုနှင့် မိမိကိုယ်ကို မိမိသိသော စိတ်အ နေအထား အပေါ်မူတည်၍ စီရင်ပါလိမ့်မည်။ (ရော ၁း၂၀) ဘုရားသည် လူအပေါင်းတို့၏ စိတ်နှလုံးကို သိတော်မူ၏။ (တ ၂း၅) ဘုရားသည် မတရားသော အမှုကို လုံးဝပြုလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
တစ်စုံတစ်ဦးသည် ဘုရားကိုအမှန်တွေ့လိုသောစိတ် နှင့်ရှာလျှင်တွေ့မည့် အကြောင်း ဘုရားကဂတိပေးထားပါသည်။ (ဟေ ၁၁း၆) ထိုသူတို့ထံသို့ ရေဒီယို၊ ရုပ်သံ၊ ဝေစာ၊ အင်တာနက် ကောင်းကင်တမန်နှင့် တမန်တော် တစ်ပါးပါးကို ဘုရားမှ စေလွှတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အဟောပြောဆုံးတရားမှာ ယေရှုအကြောင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုတရားအတွက် နှစ်စဉ်လူပေါင်း သုံးသိန်းခန့် အသက်စတေးခံ၍ ဟောကြားနေကြပါသည်။ သမ္မာကျမ်းပါ မှတ်တမ်းများတွင် ဘုရားကိုရှာသော တပ်မှူးကောနေလိထံသို့ ဘုရားက ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကို စေလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ (တ ၁၀) ဘုရားကိုရှာသော အဲသယောပိအမတ် ထံသို့ တမန်တော် တစ်ပါးကို ဘုရားမှ စေလွှတ်လျက် ယေရှုဘုရားအကြောင်းကြားသိစေခဲ့ကြောင်း မြင်တွေ့ရပါသည်။ (တ ၈) အမှန်တကယ် ဘုရားကို ရှာသောသူထံသို့ ထိုအရှင် ဘုရားက ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တမန်တော်တစ်ပါးပါးကိုဖြစ်စေ၊ ကောင်းကင်တမန် တစ်ပါးပါးကို ဖြစ်စေ စေလွှတ်ပေးနိုင်သော အရှင်ဖြစ်ပါသည်။
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 10:51 am
ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်ရပ်သည် အခြားဘာသာကြီးများနှင့်မတူသည့် ထူးမြတ်သော ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ဤဖြစ်ရပ် မမှန်ကန်ခဲ့ပါက ခရစ်ယာန်ဘာသာကြီး တစ်ခုလုံးသည်လည်း မုသာတရား ဖြစ်သွား ပေလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် မေးခွန်းကြီးများ အားလုံးထက် အရေးကြီးဆုံးသော မေးခွန်းများလည်းဖြစ်ပါသည်။
ယေရှုသည် တန်ခိုးရှင်ဘုရားဟုဆိုပြီး ကားတိုင်ထက်တွင် အဘယ့်ကြောင့် အသတ်ခံခဲ့ရပါသနည်း၊ သူ့ကိုယ်သူ မကယ်တင်နိုင် သလော?
ယေရှုဘုရားက မိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်ပြီး ထိုသေခြင်းအမှုကိုလွဲရှောင်ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင် အပြစ်ဒဏ် စီရင်ခြင်းကို ခံကြရမည် ဖြစ်ပေသည်။ သေရမည်ဟု လူကို ဘုရားကပညတ်ခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင်ပဲ လူသားများကိုယ်စား အသေခံပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လူမတတ်နိုင်သည့် အမှုကို ဘုရားက ပြုပေးခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်တရား၏အခတည်းဟူသော သေခြင်းကို ဘုရားက ထိုနည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းပေးခြင်းထက် ကြောင်းကျိုး ညီညွတ် ခိုင်လုံသော အခြားနည်းလမ်းရှိပါမည်လား။ (ဥပမာ – ကျွန်ုပ်အကြွေး ဆပ်ဖို့ရန် ငွေတစ်ထောင်လောက် ချေးငှါးပါဟု ဆိုလျှင် လူတိုင်းနီးနီးက တတ်နိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်ကြွေး အတွက် ကိုယ်စား အသေခံပေးပါဟုဆိုလျှင် အဘယ်သူမျှ လုပ်မပေးနိုင်သကဲ့သို့ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း မပေးဆပ်နိုင်ပါ။ အဘယ်မိဘ ကမျှ မိမိသားသမီးတိုင်းအား ထိုသို့ ပေးဆပ်ဖို့ရန် ခွင့်မပြုနိုင်သကဲ့သို့ မဖြစ်မနေ ထိုပြစ်ဒဏ်ကို ခံရမည်ဆိုပါကလည်း ဖြစ်နိုင်က မိဘများကိုယ်တိုင်ကသာ မိမိသားသမီးတို့ မည်မျှ ဆိုးစေကာမူ ကိုယ်စား ပြစ်ဒဏ်ခံ ပေးလိုသော မေတ္တာရှိကြပါသည်။)
သေခြင်းတရားအတွက် ယေရှုဘုရားပြုပေးခဲ့သော နက်နဲသည့်အမှုကြီး သုံးခုရှိပါသည်။ သေခြင်းဆိုသည်မှာ အဆက် ပြတ်ခြင်း ခွဲခွါခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး သေခြင်းသုံးမျိုးရှိပါသည်။ ၄င်းတို့မှာ ဘုရားနှင့်လူ အဆက်ပြတ်ခြင်း၊ ခန္ဓာနှင့် ဝိညာဉ်အဆက် ပြတ်ခြင်း နှင့် ဘုရားနှင့်ထာဝရ အဆက်ပြတ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုဘုရားသည် ထိုသေခြင်း သုံးမျိုးလုံးကို ကားတိုင်ထက်တွင် ပေးဆပ်ခဲ့ ပါသည်။
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 9:43 am
ငရဲနှင့် ကောင်းကင်ဘုံသည် အမှန်တကယ်ရှိပါသလား ?
လူအချို့က ငရဲဆိုသည်မှာ အမှန်တကယ်မရှိပါ၊ လူတို့ကိုခြောက်လှန့်သော အရာသာဖြစ်ပါသည်၊ ဘုရားက မေတ္တာရှင် ဖြစ်သည့်အတွက် မည်သူ့ကိုမှ ငရဲသို့ ချလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ဆိုတတ်ကြပါသည်။ သို့သော် ယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်နှုတ်မှ သူဌေးကြီး နှင့် လာဇရုအကြောင်းအားဖြင့် ငရဲနှင့်ကောင်းကင်ဘုံအကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ယေရှု ပြောသောစကားသည် မုသာ ဖြစ်နိုင်ပါမည်လား။ မုသာစကား ကိုပြောအံ့သောငှါလူဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်ဟု ကျမ်းစာကဆိုထားပါသည်။
လူအချို့ကယေရှုသည်ဘုရား မဟုတ်ပါ ထို့ကြောင့် ခမည်းတော်ဘုရား တစ်ပါးတည်းကိုသာ ကိုးကွယ်နာခံမည်ဟု ဆိုကြ ပါသည်။ ခရစ်ယာန်တို့၏ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုသည် သမ္မာကျမ်းအပေါ်တွင် လုံးဝအမှီပြုထားပြီး သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ် ကဆိုထားသည့်အတိုင်း တသွေမတိမ်း လိုက်နာ နာခံသော ဘာသာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းကိုလည်း ဘုရားသခင်၏ စကားတော်များအဖြစ် အကြွင်းမဲ့လက်ခံ ယုံကြည် ထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းတွင် ခမည်းတော်ဘုရားက ကောင်းကင်မှ အသံတော် အားဖြင့် ယေရှုဘုရားကို ဤသူကား ငါနှစ် သက်မြတ်နိုးရာ ငါ၏ ချစ်သားပေတည်း။ သူ၏ စကားကို နားထောင်ရမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ (more…)
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ ထူးခြားချက်မှာ အဘယ်သို့နည်း ?
Filed under: ခရစ်ယာန်သာသနာ — amayaphay @ 9:40 am
လူသားတိုင်းတို့တွင်မိမိကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာဘာသာတရားရှိကြပြီးဘာသာ တရားတိုင်းတွင် အထွဋ်အမြတ်ထားကိုးကွယ်ရာနေ့တစ် နေ့တော့ရှိတတ်ကြပါသည်။ ဘာသာမဲ့များပင်လျှင် မိမိကိုယ်ကိုကိုးကွယ်တတ်ကြပြီး မိမိမွေးနေ့တွင် သက်သတ်လွတ် စားတတ် ကြသည်။
ခရစ်တော်သည် ထမြောက်တော်မမူလျှင်၊ ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိ သင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်း အကျိုးမရှိ။ ထိုမျှမက ငါတို့သည် ဘုရားသခင် ၏အမှုမှာ မမှန်သောသက်သေခံဖြစ်ကြ၏။ (၁ကော ၁၅း၁၄-၁၅)
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်အရ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ဘာသာတရားထက် အသက်ရှင်သောဘုရားကို ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်ယာန် တို့၏ အပတ်စဉ် အထွဋ်အမြတ်ထားကိုးကွယ်ရာ တနင်္ဂနွေနေ့သည် ယေရှုဘုရားရှင်ပြန်ထမြောက်ရာ နေ့ရက်ဖြစ်ပါသည်။